खोटाङको बाँझे च्यानडाँडामा जन्मिएर,त्यहिको वन पाखा, उकाली ओराली गर्दै, बाल्यकाल बिताएकी सुमधुर स्वरकी धनी गायिका राधा राईको आज खासै परिचय दिरहनु पर्दैन । दाजु निराज राईले, हार्मोनियम बजाउदै,,गीत गाउदा, उनि पनी दाजु संगै गीत गाउथिन । रेडियोमा गीत बजेको सुन्दा, गीत गाउने मान्छेहरु त, संसारकै ठूलो मान्छे होलान् जस्तो ठान्थिन त्यो बालापनमा राधा राई ।गीत गाउने रहरले नै काठमाडौ बसाइँ सरेकी राधा राई, काठमाडौ आउने बितिकै प्रभु ढकाल, संगीता राणा र धन बहादुर गोपाली संग संगीत सिक्न सुरु गरिन। २०५८ सालमा उधो सुनकोसी नामक लोक दोहोरी र आधुनिक एल्बम साइत बजारमा ल्याएकी राधा राई, त्यही बेला देखि, सांगीतिक यात्रामा अगाडि पाइला बढाएकी हुन् । खोपी राखुला नि लै लै तिम्रो नाम दर्शने ढुंगामा, मारी दिए मायाले र ए नया मान्छे भन्ने गीत राधा राईको चर्चित छन् । २०६४ सालमा,बिबिसी नेपाली सेवाले, गरेको प्रतियोगितात्मक कार्यक्रममा प्रथम बनेकी राधा राई त्यही साल इमेज अवार्डको बेष्ट फिमेल भोकल अवार्ड पर्फमेन्सको अवार्ड पनि जितेकी थिइन् । २०६५ सालमा खोटाङ सेवा समाजको सम्मान पाएकी राधा राईले २०६६ सालको भजन गीत प्रतियोगितामा तेस्रो पुरस्कार पाएकी थिइन् । जीवन भनेको सुख दुखको संगम हो भन्न रुचाउने राधा राई,जिन्दगीको हरेक मोडमा, संघर्ष गर्न चाहन्छीन । अरुले के गर्‍यो ? के गरेन भन्दा पनि,मैले के गरे के गरिन भन्न रुचाउने राधा राई सुगम संगीतको नक्षत्र हुन् । ललितकला क्याम्पस बाट संगीतमा डिग्री हासिल गरेकी राधा राईले विभिन्न विद्यालयहरुमा संगीत शिक्षिकाको रुपमा काम पनि गरेकी छिन् । पहिलो आधुनिक एल्बमको अपार सफलता पछि दोस्रो एल्बम रिलिजको तयारीमा रहेकी राधा राई संग सुचना खबरको लागि इन्द्र जिजीबिषाले गरेको कुराकानी ।
समयको लामो अन्तराल पछाडी एल्बम रिलिजको तयारिमा हुनु हुन्छ । कस्तो एल्बम ल्याउदै हुनु हुन्छ ?
हजुर यो मेरो दोस्रो एल्बम हो ।बिचमा अलिक ग्याप भयो । तर यसबीचमा मैले, संगीतमा ललितकला क्याम्पस बाट मास्टर डिग्री सके । त्यसपछि विभिन्न स्कुल, कलेजहरुमा संगीत पढाए ।
अब आउने एल्बममा कुन विधाको, कतिवटा गीतहरु समेट्दै हुनु हुन्छ ?
अब आउने एल्बममा ४ वटा गीतहरु रहने छन् भने, लोक आधुनिक विधाका गीतहरु हुनेछ । मैले, धेरै लामो समयको अन्तराल पछाडि एल्बम ल्याउदै छु । तर धेरै मेहनत गरे पछि, संगीतलाइ बुझेर ल्याउदै छु । मेरो पहिलो एल्बम भन्दा, सशक्त गीतहरु यसमा समेटेकी छु । एक पटक सुनेर, राम्रो या नराम्रो जे जस्तो भए पनि प्रतिक्रिया दिनु हुन अनुरोध गर्दछु । एक पटक सुनी दिनु होला ।
अब अलिकति बिगत तिर जाउँ, तपाइको बाल्यकाल कहाँ र कसरी बित्यो ?
मेरो जन्म खोटाङ जिल्लाको बाँझे च्यानडाँडामा भएको हो । त्यहीको वन पाखामा जन्मे, खेले हुर्के । पढाइको अलवा, उकाली ओराली, घाँस दाउरा, मेलापात गर्दै नै बित्यो ।
कसैको प्रेरणाले गीत संगीतमा लाग्नु भएको हो कि, आफ्नै रहरले ?
मलाइ सानै देखि, गीत संगीत प्रती रुचि थियो । सानो बचपनमा, साथिहरु संग म पछि गायिका बन्छु भन्ने गर्दथे । आज पनि ती बाल्यकालको साथिहरु संग भेट हुदा यहि कुरा गर्छन् । मेरो दाजु निराज राई पनि गीत गाउनु हुन्थ्यो । उहाँले हर्मोनियम बजाउदै, गीत गाउन सुरु गरे पछि, म पनि उहाँ संगै, गीत गाउन थाल्थे । पछि काठमाडौ आए पछि, औपचारिक रुपमा संगीत सिक्न सुरु गरे ।
गीत संगीतमा लागेर, जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ ?
वास्तवमा भन्नू पर्दा, नेपालमा गीत संगीतमा लागेर जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो छ । हाम्रो संगीतको बजार पनि सानो, त्यसमाथि, सिडि किनेर, सुन्ने चलन पनि अब रहेन । यहि गीत संगीतमा नै परनिर्भर पर्नु गाह्रो छ ।
आज सम्मको सांगीतिक यात्रामा, नेपाली गीत संगीतको बारेमा के बुझ्नु भयो ?
धेरै कुराहरु,बुझ्दै, भोग्दै आउदै छु । अझ धेरै बुझ्न बाँकी नै छ । अहिले नेपालमा, गीत संगीत क्षेत्रमा टेक्निकल पक्ष धेरै राम्रो हुदै आएको छ । अरु त सिक्दै गर्दै बुझ्दै जाने हो ।
अब अन्त्यमा, अबको भावी योजनाहरु के के छन् ?
अहिले तत्कालै मेरो नयाँ एल्बमको रिलिज गर्दै छु । त्यसपछि पनि म निरन्तर गीत संगीतमै लागि रहने छु । म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अब मेरो आउदै गरेको गीतलाइ एक पटक सुनी दिनु होला ।
केपीको बर्थ डे मा छ लाखको केक